Bildad asɛm a edi kan (1-22)
Ɔrepɛ akyerɛ sɛ Hiob mma no ayɛ bɔne (4)
‘Sɛ woyɛ obi a wo ho tew a, anka Onyankopɔn bɛbɔ wo ho ban’ (6)
Ɔrepɛ akyerɛ sɛ Hiob yɛ ɔbɔnefo (13)
8 Ɛnna Bildad+ a ofi Suha+ no kae sɛ: 2 “Wobɛkeka saa nsɛm yi akosi da bɛn?+ W’anom nsɛm te sɛ mframa a ano yɛ den! 3 Wohwɛ a, Onyankopɔn bɛkyea atemmu?Na ade nyinaa so Tumfo no bɛkyea atɛntrenee anaa? 4 Sɛ wo mma no yɛɛ no bɔne a,Wɔn atuatew ho asotwe na ɔde ama wɔn no.* 5 Sɛ wode w’ani to Onyankopɔn so,+Na wosrɛ ade nyinaa so Tumfo no sɛ onhu wo mmɔbɔ, 6 Sɛ ɛyɛ ampa ara sɛ woyɛ obi a wo ho tew na woteɛ a,+Anka watwa n’ani abɛhwɛ wo,*Na wama woasan asi wo dedaw mu. 7 Anka w’awiei bɛyɛ kɛse,+Ɛwom sɛ wode ketewa na efii ase. 8 Mepa wo kyɛw, bisa awo ntoatoaso a abɛsen kɔ no,Na ma nneɛma a wɔn papanom hwehwɛ hui no ho nhia wo.+ 9 Yɛn de, nnɛra yi ara na wɔwoo yɛn, na yennim hwee,Efisɛ yɛn nna wɔ asaase yi so te sɛ sunsuma. 10 Ɛnyɛ wɔn na wɔbɛkyerɛkyerɛ woNa wɔaka nea wonim akyerɛ wo anaa?* 11 Wohwɛ a, sɛ mmɛw* annya asaase a nsu taa so* a, ebetumi anyin ayɛ tenten? Demmire* betumi anyin ayɛ tenten wɔ baabi a nsu nni anaa? 12 Bere a ennya nguu nhwiren na wonnya ntwae no,Edi kan hyew* ansa na nwura a aka nyinaa ahyew. 13 Saa na ebewie wɔn a wɔn werɛ afi Onyankopɔn no nyinaa,*Efisɛ abɔnefo* anidaso bɛyera, 14 Wɔde wɔn ho to adehunu so,Na ade a wɔde wɔn werɛ hyɛ mu no, ɛyɛ mmerɛw te sɛ ananse ntentan.* 15 Obetweri ne dan, nanso ɛrennyina;Obeso mu denneennen, nanso ɛrennyina. 16 Ɔte sɛ dua a nsu wom a enya owia,A ne nnubaa atrɛtrɛw wɔ turo mu.+ 17 Ne ntini wurawura abo a esum hɔ mu,Ɔhwehwɛ dan wɔ abo no mu.* 18 Nanso sɛ wotu no fi baabi a esi a,Baabi a na esi no bɛka sɛ ennim no, na aka akyerɛ no sɛ, ‘Minhuu wo da.’+ 19 Yiw, saa kwan no na ɔbɛfa so ayera;*+Na afei ebinom befifi afi mfuturu mu aba. 20 Wɔn a wɔn abrabɔ di mu* no, ɛnyɛ ade a Onyankopɔn bɛpo wɔn da,Na abɔnefo nso, ɔremmoa wɔn da,* 21 Ɔde ɔserew bɛhyɛ w’anom ma,Na wama wode w’ano abɔ ose. 22 W’atamfo befura animguase sɛ ntama,Na abɔnefo ntamadan befi hɔ.”
^ Nt., “Ɔde wɔn kɔɔ wɔn atuatew nsam.”
^ Anaa “Anka wakanyan ne ho ama wo.”
^ Nt., “Na wɔayiyi nsɛm afi wɔn komam.”
^ Anaa “ɔwora.”
^ Anaa “kisa; twintwam.”
^ Nt., “Saa na wɔn a wɔn werɛ fi Onyankopɔn no nyinaa akwan te.”
^ Nt., “ananse dan.”
^ Anaa “Ɔhwɛ ɔdan a wɔde abo asi.”
^ Anaa “saa na ne kwan bɛyera.”
^ Anaa “wɔn a wɔn ho nni asɛm.”
^ Nt., “ɔrenso wɔn nsa da.”